नेपाली विद्यार्थीलाई कोरोना संक्रमण भएकाे पुष्टि, अब के हुन्छ, को हुन उनी ? — Imandarmedia.com
नेपाली विद्यार्थीलाई कोरोना संक्रमण भएकाे पुष्टि, अब के हुन्छ, को हुन उनी ?
काठमाडाैं । नेपालबाट अस्ट्रेलिया आएका एक विद्यार्थीमा कोरोनाभाइरस(कोभिड-१९) को संक्रमण देखिएको क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावासले पुष्टि गरेको छ। हाल उनको रोयल होबार्ट अस्पतालमा उपचार भइरहेको र उनको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको अस्पतालको भनाइलाई उद्धृत गर्दै दूतावासले जनाएको छ।
उक्त विषयमा राजदूतावासले नेपाल सोसाइटी अफ तास्मानिया र गैरआवासीय नेपाली संघ, तास्मानियासँग समन्वयन गरिएको बताएको छ। यद्यपी दूतावासले ती विद्यार्थी अस्ट्रेलिया कहिले आएका हुन्? भन्ने खुलाएको छैन। नेपाली सोसाइटी अफ तास्मानियाकी अध्यक्ष पुनम पन्तले उनीसँगै अपार्टमेन्टमा बसेका चार जनालाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखिएको बताइन्।
‘मैले ती युवालाई भेटेर आएँ। उहाँलाई त्यस्तो कुनै समस्या छैन। उहाँको स्वास्थ्य सुधारउन्मुख हुँदै गइरहेको छ। यसका साथै उहाँसँगै अपार्टमेन्टमा बस्नेलाई चार जना नेपालीलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ।’ चारै जनामा अहिले नै कोरोनाको संक्रमण नदेखिएको उनले बताइन्। चीनले महामारीको रूप लिएको कोरोनाभाइरसलाई लगभग नियन्त्रणमा ल्याएको छ।
आइतबार चीनभित्र जम्मा ४० जनामा मात्र थप संक्रमण देखिएको छ। यी नयाँ बिरामी पनि हुबेई प्रान्तको राजधानी वुहानमा मात्र भेटिएका हुन्। यसको अर्थ कोरोनाको उदगमस्थल वुहानभन्दा बाहिर कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेको छ। हुबेई प्रान्त भन्दाबाहिर विदेशबाट आएका चार जनाबाहेक अरूमा आइतबार नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि घटेको छ यद्यपी रोकिएको भने छैन। आइतबार वुहानबाट कोरोनाका कारण २२ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
नयाँ संक्रमितको संख्या घट्नुलाई चिनियाँ अधिकारीहरूले ठूलो सफलता मानेका छन् किनभने एक महिनाअघि चीनमा कोरोनाको संक्रमण दर दिन दुई गुणा रात चौगुणा बढिरहेको थियो। फेब्रुअरी ४ मा एकैदिन ३ हजार ८ सय ८७ जना नयाँ संक्रमित भेटिएका थिए। जनवरी २३ देखि वुहान सहरलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको थियो। सहर बन्द गरिए पनि संक्रमणको दर वुहानबाहिर पनि बढेको थियो।
कोरोनाभाइरसका कारण अहिलेसम्म चीनमा ३ हजार १ सय १९ मानिसले ज्यान गुमाए छन् भने ८० हजार ३ सय ७५ जना बिरामी भएका छन्। कोरोनाको कहर चीनमा घटे पनि इरान र इटालीमा भने तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। इटालीमा एकैदिन १ सय ३३ जनाको मृत्यु भएको छ। बिबिसीका अनुसार योसँगै इटालीमा कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३६६ पुगेको छ।
त्यहाँ नयाँ संक्रमितको संख्या पनि २५ प्रतिशतले बढेको छ। यो संख्या ७,३७५ बाट ५,८८३ मा पुगेको त्यहाँको नागरिक सुरक्षा निकायले जनाएको छ। यसैगरी इटालीका सेनाप्रमुख साल्भातोरे फारिनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित सेनाप्रमुख फारिनाले आफू ठीक रहेको र ‘सेल्फ-‍क्वारेन्टाइन’मा रहेको बताएका छन्।
संक्रमण नियन्त्रणका लागि इटालीले पछिल्लो समय निक्कै कडा कदम चालेको छ। उसले लोम्बार्दी र १४ प्रान्तका १ करोड १६ लाख मानिसको आवतजावतमा कडाइ गरेको छ। विशेष अवस्थामा बाहेक बिना अनुमति घरबाहिर ननिस्कन भनेको छ।
प्रधानमन्त्री जुजेपे कोन्टेले कोरोनाभाइरसको संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै देशभरका स्कुल, कलेज, जिमखाना, म्युजियम, नाइट क्लबलगायतका सार्वजनिक स्थलहरू बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। पछिल्लो समय इरानमा पनि यसको संक्रमण उच्च देखिएको छ। इरानमा ६ हजार ५ सय ६६ मामिला पुष्टि भएको छ भने १९४ जनाको ज्यान गइसकेको छ।
अमेरिकी सिनेटर क्रुज ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’
यसैबीच अमेरिकी सिनेटर टेड क्रुज कोरोनाभाइरस भएका व्यक्तिसँग हात मिलाएको भन्दै ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ मा बसेका छन्। उनले फेब्रुअरी अन्तिम साता भएको कन्जरभेटिभ पोलिटिकल एक्सन कन्फ्रेसमा आएका एक जनासँग केहीबेर कुराकानी गरेर हात मिलाएका थिए। ती व्यक्तिलाई कोभिड १९ भएको शनिबार पुष्टि भएको थियो।
त्यसपछि क्रुजले टेक्सासस्थित आफ्नै घरमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने निर्णय गरेका हुन्। यद्यपी उनलाई अहिलेसम्म कोरोनाका कुनै पनि लक्षण देखिएका छैनन्। अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा अहिलेसम्म ४ सय १४ जनालाई कोरोना भाइरस देखिएको छ भने आइतबारसम्म २१ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
कोरोना भाइरसबारे तपाईंले थाहा पाउनु पर्ने ९ तथ्य
कोरोना भाइरस। अहिले जताततै यसैको चर्चा छ। नहोस् पनि कसरी? मानिसको रौंको चौडाइको नौ सय भागको एकभाग जत्रो हुने यो भाइरस अहिले दुनियाँका ८० भन्दा बढी देशमा फैलिएको छ।
गत डिसेम्बरदेखि चीनको हुबेई प्रान्तको राजधानी वुहानबाट फैलिन सुरू भएको यो भाइरसले शुक्रबारसम्म ३ हजार ३ सय ८३ मानिसको ज्यान लिएको छ। ९७ हजार ९ सय ३३ जना संक्रमित छन्। ठूलो मात्रामा संक्रमण फैलिएका चीन, दक्षिण कोरिया, इरान, इटालीजस्ता देशले यसलाई कसरी रोक्ने र थप फैलिन नदिने भन्नेमा आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गरेका छन्।